Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Marsa 2019 10 Lahatsoratra
Pejy 2 amin_ny 27
Tantara mikasika ny Venezoela
Fahalalahàna miteny06 Mey 2019
Fahalalahàna miteny05 Mey 2019
Mila heverina ihany ihany koa ny sanda tsy manampaharoa ananan'ny kaonty tahaka ireo naato ireo -- eny fa na dia mandrorarora teny fankahalana sy fitongilanana aza --.
Venezoela: Blogstock faharoa
Mediam-bahoaka29 Avrily 2019
Nandritra ny roa andro, nivory faharoa izay fanao isan-taona ny tontolon'ny bilaogy Venezoeliana [ES] tao amin'ny toerana iray lavitry ny renivohitra mba hanao fety miaraka amin'ny tarika mozika sy ny toaka. Blogstock no anaran'ny "fety". Tsy misy ny famelabelaran-kevitra na symposioma fa fetibe ao anatin'ny fiarahan'ireo mpinamana nomerika fotsiny izany.
Venezoela: Fifampiraharahana momba ny angovo nokleary miaraka amin'i Rosia
Rosia28 Avrily 2019
Tantosa soa aman-tsara ny fanantenana nateraky ny fitsidihany noho ny fifanarahana hanangana toby toerana atomika 500 megawatt. Haharitra 10 taona eo ho eo ny fanorenana ilay toerana. Venezoela no firenena Amerikana Latina voalohany hanasonia fifanarahana momba ny angovo atomika amin'i Rosia.
Fanoherana27 Avrily 2019
Afrika Mainty25 Avrily 2019
Venezoela: Mpisera Twitter notanana noho ny fampielezana vaovao ” manakorontana”
Fanarahamaso23 Avrily 2019
Ny 14 Martsa 2013, notanan'ny manampahefana Venezoeliana i Lourdes Alicia Ortega Pérez satria voalaza fa "nisandoka ny mari-panondroan'ilay manampahefana tao amin'ny Sampan-draharaha Mahaleontena amin'ny Fisoratana Anarana sy ny Nôtera " ary nandefa hafatra tao amin'ny Twitter izay noheverina fa "manakorontana ny firenena".
Fandrahonana-lalàna22 Avrily 2019
Ny takarivan'ny 7 mey, nosamborin'ny Sampan-draharahan'ny Fitsikilovam-pirenena Bolivariana ao Venezoela (SEBIN, fanafohezan-teny amin'ny teny espaniola) tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Caracas ilay mpahay toekarena sady mpikatroka zon'olombelona Rodrigo Diamanti, ary nentina tany amin'ny foiben-toeran'ny SEBIN.
Fitsipika21 Avrily 2019
Fanangonana tahirin-kevitra momba ny mety hisian'ny sivana amin'ny tranonkala any Venezoela
Fanentanana20 Avrily 2019
Manangom-baovao momba ny fanakanana tranonkala any Venezoela ireo mpanoratra ato amin'ny Global Voices -- ary mila ny fanampianao izy ireo.